17 “E gbuwo mmụọ m,+ e mewokwa ka ụbọchị m nyụọ ka ọkụ;Ọ bụ m ka e debeere ili.+ 2 N’ezie, a na-akwa m emo,+Anya m dịkwa n’omume nnupụisi ha. 3 Biko, ka ihe ibé m dịrị gị n’aka.+Olee onye ọzọ ga-anara m n’ibé?+ 4 N’ihi na i mechiwo obi ha ka ọ ghara inwe ezi uche.+Ọ bụ ya mere na ị naghị ebuli ha elu. 5 O nwere ike ịgwa ndị enyi ya ka ha were òkè ha,Ma anya ụmụ ya agakwaghị ahụ ụzọ.+ 6 O mewo ka m bụrụ ihe ndị mmadụ ji atụ ilu,+M wee ghọọ onye a na-agbụ ọnụ mmiri n’ihu.+ 7 Anya m na-ahụ inyoghi inyoghi n’ihi iru uju,+Ahụ́ m dum dịkwa ka onyinyo. 8 Ndị ziri ezi kporopụrụ anya na-ele m,Ọbụna onye aka ya dị ọcha na-ewesa onye si n’ezi ofufe dapụ iwe. 9 Onye ezi omume na-anọgidesi ike n’ụzọ ya,+Onye aka ya dị ọcha+ na-enwewanyekwa ume.+ 10 Otú ọ dị, unu niile nweziri ike ịga n’ihu. Biko, kwuwenụ,N’ihi na ahụghị m onye maara ihe n’etiti unu.+ 11 Ụbọchị m agafewo,+ a kụghasịwokwa atụmatụ m,+Bụ́ ọchịchọ obi m. 12 Ha na-eji abalị mere ehihie, ma na-asị:+‘Ìhè dị nso n’ihi ọchịchịrị.’ 13 Ọ bụrụ na mụ anọgide na-echere, Shiol ga-abụ ụlọ m;+Ọ bụ n’ọchịchịrị+ ka m ga-agbasa ihe ndina m. 14 M ga-eji oké olu gwa olulu,+ sị, ‘Ị bụ nna m!’Gwakwa ikpuru,+ sị, ‘Ị bụ nne m na nwanne m nwaanyị!’ 15 Oleezi ebe olileanya m dị?+Olileanya m kwa, ònye na-ahụ ya? 16 Ha ga-agbada ruo n’ọnụ ụzọ Shiol,Mgbe anyị niile ga-agbadakọta n’ájá.”+